Axmad Madoobe oo ka hadlay xiriika Villa Soomaalya iyo shirkii SPF -News and information about Somalia
Home Warkii Axmad Madoobe oo ka hadlay xiriika Villa Soomaalya iyo shirkii SPF
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo xalay ka hadlayay munaasabad ka dhacday Magalada Kismaayo ayaa waxaa uu ka hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka,khilaafka Jubbaland ee dowladda & Shirkii Iskaashiga ee ka dhacay Magalada Muqdisho.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in Doorashooyinku markii ay dhamaadeen ay Jubbaland diyaar u ahayd sidii Khilaafka kala dhexeeya Dowlada Federaalka ah wada hadal loogu dhamayn lahaa balse taas badalkeeda Xukuumada Federaalka ah ay xayiraado iyo cunaqabatayno kusoo rogtay dadka ree Jubbaland.
Madaxweynahu waxaa kale oo uu sheegay in hanaanka dayn cafintu uuna dhaqan gali Karin iyadoo Madaxda Villa Soomaaliya joogta ay ku tumanayaan shirciga dalka waa sida uu ahdalka u dhigay.
Maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa horay u qaadacay Shirka Caalamiga ee Madasha Iskaashiag ee ka qabsooman Magalada Muqdisho, iyaga oo sheegay in shirkaasi aan lagal talo gelin sidoo kale ay soo bandhigeen shuruudo ay shirkaasi ku imaan karaan.
Previous articleDhimasho iyo dhaawac ka dhashay Qarax Maanta ka dhacay Isbaarada Shabeelle
Next articleDawladda Qadar oo shaacisay 2 Arrimood oo farxad-galiyey Farmaajo iyo Kheyre.
Fahad Yaasiin oo ka biyo diidan in uu hortaggo Golaha Shacabka...